रेडियो ताप्लेजुङ दसैंः गयो बरिलै !
दसैंः गयो बरिलै !
कार्तिक १० गते । एउटा भेटघाटबाट कुरा थालौं । दसैं सकिएकै थिएन । बिहानै पशुपतिनाथ परिसरमा एकजना पूर्वकम्युनिष्ट नेतासंँग भेट भयो ।
उनी मेची किनारबाट काठमाडौं आएका रहेछन् । बोल्नलाई सिपालु थिए । जम्काभेट हुनासाथ राजनीति, दर्शनशास्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनका विषयमा कुरा गर्न थालिहाले । कुरैकुरामा उनले काठमाडौंमा आफूले देखेको दसैंको अनुभूति सुनाए । भन्नथाले, ‘यो दसैंमा मैले अनेकौं नेता देखेँ । महाराजा जस्ता । राजा जस्ता । छोटेराजा जस्ता । बाइसे–चौबिसे जस्ता । हेर्नलाई उनीहरूको रंग फरक छ । रूप फरक छ । उनीहरूको लिंग फरक छ । उनीहरूको भाषा, भेष र भूगोल फरक छ । राजनीति फरक छ । कोही निर्मल निवासमा बस्छन् । कोही शीतल निवासमा । कोही खुमलटारमा । कोही बालुवाटारमा । केही मधेसमा । कोही पहाडमा । तर उनीहरू सबै–सबै राजा हुन् । यो दसैंमा मैले हरेक नयाँ राजाहरूभित्र श्रीपेच, सिंहासन र गजुरको अभिलासा देखेँ’ ।
यसो भनिरहँदा उनमा आक्रोश थियो । त्यही आक्रोशको रापले रातोपिरो हुँदै उनले प्रश्न गरे, यो कस्तो गणतन्त्र हो रु यो कस्तो कम्युनिष्ट शासन हो रु जसले पाइलैपिच्छे सांस्कृतिक जागरणको नारा लगाउँछ र आफ्नो दमित इच्छाहरूको सिंहासनबाट सांस्कृतिक सामन्तवादलाई जगाउँछ ?
दसैं, राजा र रामलालहरूको केही कुरा गरौं । कुरा थालौ दसैंबाट । केटाकेटी छँदा हामी दसैं आएको आकाशबाट थाहा पाउँथ्यौं । निलो आकाश । सफा र कञ्चन बादल । जमिनबाट थाहा पाउँथ्यौं । पहेंँलपुर खेत । उज्याला बारी । ढकमक्क फूलहरू । त्यसरी नै दसैंले शुभसंकेत दिन्थ्यो । जब रेडियोमा मंगल धुनहरू बज्न थाल्थे, हाम्रो केटाकेटी मनले वेग माथ्र्यो । छातीमा अनेकौं रहरहरू पलाउँथे ।
नाना, गाना र बजानाका अनेक सपनाहरू ब्युँझिन्थे । दसंै हाम्रालागि असीमित खुसी लिएर आउँथ्यो । तर उमेर बढ्दै जाँदा दसैंका अर्कै खाले रंगहरू देखिन थाले । खैरा, काला, सेता रंगहरू । थाहा भयो, दसैं केही राजनीति, केही अर्थनीति र केही सामाजिकरसांस्कृतिक नीतिहरूको गठजोड रहेछ । दसैं मिथहरूको पर्वमात्र नभई नयाँ राजाहरूको वर्चस्वको पर्व पनि रहेछ । हामी सोच्थ्यौं, दसैं आनन्दको उत्सव हो । निश्च नै हो । तर त्यो आनन्द दरबार र झुप्रोमा फरक रंग, चाल र लय बोकेर आउँदो रहेछ । मनमा प्रश्नहरू उठे । दसैंमा आनन्द, आशिर्वाद र अनुभूतिहरूको लय किन एउटै हुँदैन रु हाम्रो गणतन्त्र जसरी पक्षपाती छ, कम्तीमा दसैं त्यसरी नै पक्षपाती नभएको भए कस्तो काइदा हुन्थ्यो होला रु
कुनै बेला टीकाको दिन हाम्रा बाजे, बजुहरू मूलढोकाको शिरमा राजाको प्रतिस्थापन गरेर टीका लगाइदिन्थे । त्यसपछि घरमा टीका सुरु हुन्थ्यो । दशक अघिमात्र, काठमाडांैमा नारायणहिटी नाम गरेको दरबार थियो । जहाँ राजारानी बस्थे । त्यहाँ हरेक दसैंमा मान्छेहरू ताँतीका ताँती टीका थाप्न जान्थे । रेडियोले राजभक्तिको कविता बजाउँथ्यो ।
केटाकेटीमा हामी रमाउँथ्यौं । रहरै–रहरमा हामी आफू पनि राजा हुने सपना देख्थ्यौं । बाआमाहरू राजा हुने आशिर्वाद दिन्थे । तर कसैले भन्यो, ‘राजा सामन्तवादको प्रतीक हो । राजा अन्धकारको प्रतीक हो । अन्धविश्वासको प्रतीक हो । अहंकारको प्रतीक हो । गरिबीको जड हो । हाम्रो विभेदको कारण हो । राजनीति, अर्थनीति र संस्कृतिका कुरूपताहरू सबै–सबै नारायणहिटीमा संकेन्द्रित छन्’ । कुरा बुझ्दै जाँदा हो रहेछ । त्यसैले हामीले पत्यायौं । त्यसपछि हामीले मूलढोकामा राजालाई राखेर टीका लगाउन छाड्यौं । राजा हुने सपना छाड्यौं । राजालाई फाल्न संघर्ष गर्‍यौं । राजा फाल्यौं । गणतन्त्र आयो ।
जसै गणतन्त्र आयो, हामीलाई लाग्यो, अब सबै कुरा फेरिनेछन् । अब उज्यालो आउनेछ । राम्रा दिनहरू आउनेछन् । राजा र रैतीका विभेद सकिनेछन् । अब कोही निम्छरो र कोही विशेष मान्छे हुने छैनन् । कोही पाइतालाको धुलो र कोही शिरको प्रसाद हुने दिन गए । अब कसैले, कसैका अगाडि घुँडा टेक्नु पर्दैन । लोकतन्त्र समानता लिएर आउनेछ । गणतन्त्रले मानव गरिमालाई उँचो बनाउनेछ ।
नभन्दै केटाकेटीमा हामीलाई गणतन्त्रको गीत सिकाउनेहरू नै सरकारमा आए । गणतन्त्रका नायक बने । तर कस्तो विचित्र, विस्तारै तिनै नायकहरू उल्टो नाच्न थाले । राजाको मुखुन्डो लाएर । उनीहरूले काठमाडौंमा नयाँ दरबारहरू बनाए । नयाँ ठाँटबाँठ सिके । ठाँटसाथ उनीहरू देखापर्न थाले । इन्द्र जात्रामा । कुमारी जात्रामा । दसैंमा । तिहारमा । उनीहरू माथि बस्न थाले, सिंहासनमा । बग्गीमा । रिसल्लाहरूसंँग । दरबारको बुर्जामा । सेवकहरूसँंग । उनीहरूको भाषा, भेष र संस्कारमा शाही गन्ध आउन थाल्यो । नयाँहरूले पनि ठ्याक्कै उस्तै लय टिपे, जसलाई उसबेला नारायणहिटीमा गाइन्थ्यो । यसरी पुराना राजाको श्रीपेचमा नयाँ राजाहरू जन्मिए । उनीहरू शीतल निवासमा हुर्किंदै गए ।
यो दसैंमा, तिनै नयाँ राजाहरू अक्षता र जमरा बोकेर आफ्ना प्रजाजनलाई आशिर्वाद दिन इन्द्रासनमा बसे । नभन्दै आफ्ना ख्वामितको जयजयकार गर्दै सयौं चाकरहरू दरबारको पटांगिनीमा लाइन लागे । त्यसरी नै जसरी हिजो पञ्चहरू लाग्थे । कोही बाँसजस्तो निहुरिएका । कोही सर्पजस्तो गुडुल्किएका ।
कोही हनुमानको जस्तो घुँडा टेकेका । मन्त्री लम्पसार छ । वकिल लम्पसार छ । व्यापारी लम्पसार छ । ठेकेदार लम्पसार छ । सबै प्रभूको जयजयकार गर्दैछन् । कस्तो विचित्रको दसैं । हिजो र आज कस्तो दुरुस्तै दृश्य । बस् नयाँ भूपतिहरू मुस्कुराउँछन् र आशिर्वाद दिन्छन् । इतिहासको यति निर्मम पुनरागमन रु गणतन्त्रको योभन्दा ठूलो सांस्कृतिक पतन अरु के हुन्छ रु
अब रामलालको कुरा गरौं । दरबारको बडादसंैलाई आफ्नो मैलो टिभीमा हेरेर भोकै निदाउने पात्रको नाम हो– रामलाल । ऊ गरिब छ । निर्धो छ । यसपाली उसले दसैंमा खर्च गर्न राखेको पैसाले तरकारी किन्न पुग्दैन ।
लुगा किन्यो, चामल नाई । चामल किन्यो, मासु नाई । मासु किन्यो, मसला नाई । उसका लागि दसैं आधा खुसी र आधा दुस्ख लिएर आउँछ । किनभने दसैंले महंँगी बढाउँछ । कालोबजारी हुर्काउँछ । अपमान दिन्छ । भुक्तमान दिन्छ । ऋण थप्छ । महँगीमा गरिबलाई कस्तो दसंै आउँछ रु त्यसको पछिल्लो अनुभव हो, रामलाल । उसले सुनेको थियो, यो पाली काठमाडौंमा सर्वहारा सत्ता छ ।
उसले सुनेको थियो, यो पाली प्रदेशमा कम्युनिष्टहरूको सत्ता छ । कम्युनिष्टहरू गरिबको कुरा गर्छन् । कम्युनिष्टहरू समानताको कुरा गर्छन् । कम्युनिष्टहरू न्यायको कुरा गर्छन् । सरकार समृद्धिको कुरा गर्दैछ । उसलाई आशा थियो, यसपाली दसैं नयाँ आशा र उत्साह लिएर आउँछ । बजारमा । घरमा । समाजमा । तर जब दैलोमा दसैंको विवेकहीन आगमन हुन्छ, तब रामलालका सबै विश्वास भत्किन्छ । उसलाई यसपालीको दसैं पनि उस्तै लाग्छ । पञ्चायतको जस्तै । उस्तै निरंकुश । उस्तै अहंकारी । उस्तै सामन्तवादी । राजा फालेर गणतन्त्र आउँदा पनि दसैं उस्तै हुनु केको संकेत हो रु रामलाल प्रश्न गर्छ । तर उसका प्रश्नहरूको जवाफ दिने लाल कमरेडहरू कतै देखिँदैनन् ।
गणतन्त्र राज्यको उपरी संरचनामा आउने परिवर्तनमात्र हैन । गणतन्त्र राजा फाल्ने व्यवस्थामात्र हैन । गणतन्त्र एक आह्वान हो, जीवन पद्धति हो, संस्कृति हो । गणतन्त्रले भन्छ कि सबै मान्छे एकै हुन् । कोही पनि राजा हुँदैनन् । कोही पनि प्रजा हुँदैनन् । मान्छेका भाग्य उस्तै–उस्तै हुन्छन् । उस्तै हुनुपर्छ पनि ।
जब मान्छे समान छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिन्छ, तब संस्कृति, जीवनशैली, व्यवहार पनि सोही अनुसार निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिमा आएको गणतन्त्रले सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनलाई बदल्न सक्दैन । अनि हाम्रो गणतन्त्र पंगु बन्छ । अर्थहीन बन्छ । अनि सामन्तवाद सांस्कृतिक रूपमा फणा फिजाउँदै आउँछ र मान्छेलाई डस्न थाल्छ । यसले मानव समृद्धि र विकासमा योगदान गर्न सक्दैन । बरु विष भर्छ । त्यो विषले सबैलाई सिध्याउनेछ । दसैंमा सांस्कृतिक सामन्तवादको जुन भद्दा स्वरुप देखापर्‍यो, त्यसले गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई बर्बाद बनाउने पक्का छ । आजको चिन्ता यही नै हो ।
फेरि रामलालकै कुरा गरौं । रामलालहरू अथवा सबैभन्दा गरिब वर्ग । उनीहरूका कुरा ‘साधारण’ छन् । उनीहरू चाहन्छन्, अर्को वर्ष दसैं पक्षपाती नहोस् । अबका दिनहरू राम्रा हुन् । दसंै पनि फेरियोस् र राजनीति पनि । राजा, रानी, मन्त्री, हाकिम र जनता सबै एकैठाउँमा उभिएर दसंै मनाउन पाऊँ । यहाँ उल्लेख गरिएको दसैं एक ‘प्रतीकात्मक’ कुरा हो । मुख्य कुरा गणतन्त्र ‘समानता, न्याय, विवेक र स्वाभिमानको’ नाम हो । याद गरौं कि गणतन्त्र भनेको नेपाली समाजको सांस्कृतिक उन्नयनको आह्वान हो । अग्रगमन तिरको यात्रा । गणतन्त्रमा दरबारहरू हुँदैनन् । गणतन्त्रमा सबैले सबैलाई आशिर्वाद दिन पाउँछन् । यसर्थ आशा गरौं, आउने साल त्यस्तै हुनेछ, जस्तो रामलालहरू सपना देख्छन् ।
लेखक केशब दाहाल,ई कान्तिपुर डट कम